शाहिद भन्दा पहिले कति जनासँग थियो मिराको अफेयर ? भयो खुलासा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
शाहिद भन्दा पहिले कति जनासँग थियो मिराको अफेयर ? भयो खुलासा
११ पुष,२०७३ | Agency
विवाह पछि पहिलो पटक श्रीमतीसँग च्याट शो ‘कफी वीद करण’मा पुगेका शाहिद कपूरले आफूसँग विवाह गर्नुभन्दा पहिले मीराको कति जनासँग अफेयर थियो भन्ने खुलासा गरेका छन् । शो मा कुराकानी गर्ने क्रममा मीराले आफूलाई शाहिदको बारेमा सबै कुरा थाहा भएको बताउना साथ शाहिदले भने आफू अहिले मीराका पूर्व प्रेमीहरुको खोजीमा रहेको बताए । त्यसपछि झट्ट प्रस्तोता करणले विवाह भन्दा पहिले मीराको अफेयर कति जनासँग थियो भनेर प्रश्न गरे । यसको जवाफ शाहिदले नै दिए । उनले भने, मेरो भन्दा कम छैन ।
शाहिदको फिल्मको सूचि जति लामो छ त्यति नै उनको अफेयरको पनि छ । उनको अफेयर सूचिमा करीना कपूर, प्रियंका चोपडा, बिद्या बालन, अनुष्का शर्मा, बिपासा बसु, अमृता राव, सोनाक्षी सिन्हा र हुमा कुरैसीको नाम छ ।
त्यस्तै शाहिदसँग विवाह भएपछि मीराका एक प्रेमी सार्वजनिक भएका थिए । मीरा र उनका प्रेमी आदित्य लालका केही तस्वीरहरु भाईरल पनि भए । स्कुलमा पढ्दा देखि नै उनीहरु एकअर्कालाई माया गर्थे । केही बर्ष एकअर्काको प्रेममा रहेका उनीहरुले पछि एकअर्काबाट अलग हुने निर्णय लिए । त्यसपछि आदित्य अध्ययन गर्नको लागि लण्डन गएको बताईन्छ ।
ट्वाईलेटका कारण मीरासँग डराउँछन् शाहिद
अभिनेता शाहिद कपूर पहिलो पटक कुनै च्याट शोमा श्रीमती मीरासँग पुगे । आईतबार स्टार वल्र्ड च्यानलबाट टेलिकास्ट भएको शो कफी विद करणमा शाहिद..
तस्वीरमा बेबी बम्प देखाउँदै मीरा, खुसी देखिए साहिद